Shraddha Kapoor Oo Siweyn Isku Badashay Si Ay Doorkeeda Filimka Half Girlfriend Kaga Run Sheegto - Hablaha Media Network
Shraddha Kapoor Oo Siweyn Isku Badashay Si Ay Doorkeeda Filimka Half Girlfriend Kaga Run Sheegto
HMN:- Filimka Half Girlfriend waxaa hogaamiyaal ka ah Arjun Kapoor iyo Shraddha Kapoor halka uu Director ka yahay Mohit Suri sidoo kalena sheekadiisa waxaa laga soo min guuriyay isla buuga Half Girlfriend ee uu qoray Chetan Bhagat.
Hadaba filimkaan la daawan doono 19-ka May waxaa laga soo bandhigay sawir u gaar ah Shraddha Kapoor iyo muuqaal ahaan sida ay isku badashay si ay doorkeeda kaga run sheegto.
Shraddha waxay mataleysaa filimkaan gabbar ku nool magaalada New York oo cayaaro Basket Ball ama kubada koleyga sidoo kalena leh soo jiidasho dheeraad ah.
Si Shraddha doorkeeda u noqdo mid xaqiiqada u dhow xidigtaan sawirka sare ayaa laga soo bandhigay oo caddeyn u ah inay si adag isugu diyaarisay doorkeeda gabadha kubada koleyga cayaarto.
Shraddha iyo Director Mohit Suri xiriir aad u wanaagsan ayaa ka dhaxeeyo madaama ay horey u wada sameeyeen filimadii hirgaleen Asshiqui 2 (2013) iyo Ek Villain (2014).
Wuxuuna Director Mohit sheegay in Shraddha Kapoor tabbar adag qaadatay si ay doorkaan kaga run sheegto sidoo kalena gabdhaha Shraddha la cayaarayaan kubada koleyga waa kuwo xirfadooda tahay cayaarta sidoo kalena filimkaan xiiso gaar ah u yeeli doonaan.